​होसियार ! रुद्राक्ष किन्दा ठगिनुहोला
इटहरी । मोरङको सुन्दरहरैंचा-४का नविन चौलागाइले भाद्र २९ गते एक व्यापारी सँग एकमुखे रुद्राक्ष किने । एक ब्यापारीले रुद्राक्ष र रामसिता तथा हनुमानको चित्र अंकित एउटा सिक्का चौलागाइ दम्पतीलाई देखाए । एकमुखे रुद्राक्ष देखेपछि चौलागाइ दम्पतीको मनमा किन्ने सोच आयो । अर्को मानिसलाई बेच्नु छ....
​नचिरीकनै टाउकाको ट्युमरको उपचार हुने
विराटनगर । विराटनगर–४ कञ्चनबारीमा रहेको नोवेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलले अत्याधुनिक उपकरणबाट टाउकाको ट्युमरको उपचार सुरु गरेको छ । नोवेलममा आँखा, नाक तथा टाउकाको ट्युमर, क्यान्सर, मासु पलाएको विना चिरफार उपचार गर्ने नोवेल अस्पतालले जनाएको छ ।
सर्जरीका प्रख्यात विशेषज्ञ चिकित्सकबाट टाउकामा हुने ट्युमरको....
दसैं मनाउन बालुवाको भर
तेह्रथुम । तेह्रथुमको दुर्गम गाउँमा रहेका मजदुरहरु दसैं खर्च जुटाउन खोलाबाट बालुवा निकाल्न ब्यस्त छन् । तेह्रथुमको साव्ला र ओयाक्जुङको विचमा रहेको खोरुङा खोलाबाट बालुवा निकालेर उनिहरु दशै खर्च जुटाउन लागि परेका हुन । खोलाबाट जम्मा गरेको बालुवा बेचेर दशै खर्च जुटाउन लागेको साव्ला निवासी....
​दुईहजारको पुँजीले जन्माएको पुर्वको चर्चित नर्सरी
इटहरी । ३० वर्ष अघि इटहरीमा नर्सरी थिएन । गाउँमा हिँड्ने ब्यापारीले अत्याधिक महँगोमा किन्ने गर्थे । तर अहिलेको समयमा विभिन्न नर्सरीहरुले बिरुवा उत्पादन र बिक्रि गरिरहेका छन् ।
इटहरी १ स्थित रहेको पशुपति नर्सरी यतीबेला कुनै नौलो नाम हैन । तीन दशक देखि....
​अस्पतालले नियन्त्रणमा लिएको शव आफन्तलाई बुझायो
विराटनगर । उपचार खर्च नदिएको भन्दै विराटनगर न्युरो अस्पतालले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका २ पिडारवनीकी ६० वर्षीय गेरीदेवी माझीको शव परिवारलाई बुझाएको छ ।
शव राखेर आफन्तलाई अन्त्येष्टी गर्न नदिएको भन्दै चौतर्फी दवाब आएपछि परिवारका सदस्यलाई अस्पतालले शव बुझाएको हो । मृत्यु....
​अस्पतालले नियन्त्रण गर्यो शव, परिवारले अन्त्येष्टी गर्न पाएनन
विराटनगर । गत भदौ २८ गते मोटरसाइकले ठक्कर दिएर घाइते भएकी मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–२ पीडारवनीकी ६० वर्षीय गेरीदेवी माझीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । उनको शनिबार दिउँसो दुई बजे मृत्यु भएतापनि परिवारले उनको शव पाएका छैनन् ।
पैसा नतिरेको भन्दै विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालले....
​ओलीले इटहरीमा मेयरलाई सम्झाए, विराटनगरबाट सरकारलाई हकारे
इटहरी । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विकासमा राजनीति हाबी हुन नदिन र आर्थिक विकासमा लाग्न इटहरीका मेयरलाई आग्रह गरेका छन् । सुनसरीको इटहरीमा आयोजित नगर सभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले जितेर आइसकेपछि यो वा त्यो दल भन्न नहुनेमा जोड दिए....
​८० रुपैयाँ बिजुली बिल तिर्न दुई हजार खर्च
तेह्रथुम । विद्युत् महसुल बुझाउने केन्द्र घरबाट निकै टाढा भएपछि सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने गरेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण पूर्वी पहाडी जिल्लामा थोरै महसुल बुझाउन धेरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
रु ८० विद्युत् महसुल बुझाउन उपभोक्ताको रु दुई हजार खर्च हुने गरेको....
​सावधान : पथरी र उर्लाबारीमा भेटियो डेंगु सार्ने लामखुट्टे !
पथरी । गतवर्ष डेंगु रोगबाट प्रभावित मोरङको पथरीशनिश्चरे र उर्लाबारी नगरपालिकामा यसवर्ष पनि डेंगु सार्ने इडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टे फेला परेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पथरीशनिश्चरेको पथरी बजार र उर्लाबारी बजारमा डेंगु रोग सार्ने लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्ने क्रममा त्यस्तो लामखुट्टे प्रसस्त मात्रामा....